Kedu otu esi emeghe ụlọ akụ na France? Họrọ ụlọ akụ French
Atụmatụ maka imeghe akaụntụ akụ na France
Edere site Tranquillus | Jul 9, 2018 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Mgbe ị na-edozi na France, imeghe akaụntụ akụ na-abụkarị usoro dị mkpa. Ọ gaghị ekwe omume ibi ndụ na-enweghị ya: ọ dị mkpa ịnata ego, wepụ ya ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ngwaahịa na ọrụ ... Lee ụfọdụ atụmatụ iji mepee akụ akụ na France ma họrọ ụlọ akụ.
Ego French maka ndị ala ọzọ
Ma ị na-aga France ka ị na-amụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ, imeghe akaụntụ akụ dị mkpa. Nzọụkwụ ahụ nwere ike iwepụta oge, mana ọ bara uru maka ndị chọrọ ịnọ ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ afọ na ala French.
Ndị mba ọzọ bi na France aghaghị imeghe akaụntụ akụ. Ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịtụgharị aka n'èzí mba ọzọ n'ihi ntakịrị ụgwọ. N'ezie, idebe akaụntụ gị na obodo gị nwere ike ịme mkpebi dị oké ọnụ ma dị oke ego.
Ogologo oge ịnọ na France bụ mkpebi maka nhọrọ nke onyinye na ụlọ akụ. Ndị bi mba ọzọ agaghị aga n'otu banki ma ọ bụ uru ọ bụla ma ọ bụrụ na ha ezubere ịnọgide na-anọchi ma ọ bụ na-erughị otu afọ na ala French.
Ọnọdụ maka ịmepe akaụntụ na akụ akụ France
Ndị chọrọ ka ha mepee ụlọ akụ dịka ndị mba ọzọ ga-achọ ka ha chee foto ID. O nwere ike ịbụ paspọtụ. A na-arịọ ndị ọzọ akwụkwọ na-egosi na onye nyerịta akwụkwọ ahụ nwere ike ịrịọ. Nke a na-eme karịsịa ma ọ bụrụ na ndị ikpeazụ ahụ enweghị ike ịga ma ọ bụ ghara ịga ụlọ ọrụ (ụlọ akụ n'ịntanetị, dịka ọmụmaatụ). Onye ahụ ga-abụ ọgbọ, a gaghị amachibido ya iwu.
GỤỌ Ihe gbasara ịkwọ ụgbọala na ịkwọ ụgbọala na France
A ga-achọkwa ihe akaebe (na-akwado adreesị obibi na France). A pụkwara ịtụ anya ụfọdụ akwụkwọ na-akwado ọnọdụ ego ya dị ka nkwekọrịta ọrụ ma ọ bụ ihe akaebe nke ego. Bankslọ akụ French anaghị enyekarị ikike ịkwụ ụgwọ na akaụntụ akụ ndị a.
Mepee otu ụlọ akụ maka ihe karịrị otu afọ
Ufuru ala nwere ike taa omenala, ya mere, nke anumanu, ma obu nke oma dika ozo n'igwe. Onyinye ha dị iche iche, a ghaghị iji ha tụnyere.
Ọfịs ndị French omenala
Maka ndị mba ọzọ, ihe kachasị mfe bụ ịchọta ndụmọdụ nke ụlọ akụ French, karịsịa ma ọ bụrụ na ọkwadoghị ihe ndị a na-atụ anya ya site na ụlọ akụ dị n'Ịntanet. Ndị chọrọ ịmepe akaụntụ akụ na ụba ga-ebi na France, ọ bụghị naanị maka njem.
Isi ụlọ akụ ndị dị na France dịka Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel ma ọ bụ HSBC bụ ụlọ akụ niile ndị mba ọzọ nwere ike ịrịọ. Eziokwu dị mfe nke ịga na ụlọ ọrụ ahụ na kaadi kaadị yana nkwenye nke njirimara na ego nwere ike ịzuru iji meghe akaụntụ akụ.
Ihe ị chọrọ ịma banyere ụlọ akụ dị n'ịntanetị bụ na ha na-achọkarị onye na-edeba aha iji nweta akaụntụ akụ n'aka ụlọ akụ French. Nke a na-enye ha ohere iji nyochaa njide onye njide ma chebe onwe ha pụọ ​​na aghụghọ. Onye ọ bụla chọrọ ịmepe ụlọ akụ na France ga-abụrịrị na ọ nọ n'ụlọnga France. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ enweghị akaụntụ, ọ ghaghị ibu ụzọ tụgharịa gaa ụlọ akụ French ka ọ mepee akpa. Mgbe ahụ, ọ ga-enwere onwe ya iji rịọ maka ụlọ akụ na ebe nrụọrụ weebụ iji gbanwee ya.
GỤỌ Ihe ị chọrọ ịma banyere ịghara
Ndị mba ọzọ bi na France ịga rụọ ọrụ ma ọ bụ ịga n'ihu na ọmụmụ ha ga-enwe ike ịbanye na bank ndị France n'igwe. Ha dị mma maka ndị mba ọzọ ebe ha bụ ọnụ ala. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-enye onyinye n'efu ma nabata ndị ahịa nke mba niile ma ọ bụrụhaala na ha nwere ike igosi na ha bụ ebe obibi na France.
Bankslọ akụ dị n'ịntanetị na-enwekarị ọnọdụ ole na ole, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-adọrọ mmasị karịa ndị ọzọ. Ọtụtụ mgbe, ndị debanyere aha ga-abụrịrị afọ iwu, biri na France ma nwee akwụkwọ nkwado dị mkpa (njirimara, ụlọ na ego). Bankslọ akụ ndị a dị n'ịntanetị: Fortuneo, ING Direct, Monabanq, BforBank, Hello Bank, Axa Banque, Boursorama…
Mepee otu ụlọ akụ maka ihe na-erughị otu afọ
Ọnọdụ a na-echekarị ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ Erasmus bịa na France maka ọnwa ole na ole. Ndị mba ọzọ a na-achọ ụlọ akụ French ka ha mepee akaụntụ ma chekwaa ụgwọ ụlọ akụ (zere izipu ọrụ site na mba ndị ọzọ). N'ezie, maka ụmụ akwụkwọ ndị a, ọrụ maka ịkwụ ụgwọ na ndọrọ ego dị oke elu nke na ọ dị ha mkpa ịmepe otu ụlọ akụ nke nọ na France.
Ụlọ akụ na-adịghị na-enye ihe ngwọta emere ndị a. Ebe a na-emekarị ka ụlọ akụ bụrụ ihe ngwọta kachasị mma maka ịmepe ụlọ akụ ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala otu afọ.
Mepee akụ akụ na France mgbe ị na-ebi ná mba ọzọ
Ndị mba ọzọ na-adịghị ebi na France nwere ike ịchọrọ ịchọta akụ na France. Enweghị ike ịchọta ụdị inyefe ego a. Ọtụtụ ụlọ akụ French na-ajụkwa imeghe akaụntụ ndị a. Ọ dị ole na ole ngwọta ga-anọgide.
GỤỌ Kedu ka ezumike akwụ ụgwọ si arụ ọrụ?
Nke mbụ bụ ịtụgharị na ụlọ akụ ọdịnala maka ndị mba ọzọ. Fọdụ na-anabata ndị ahịa na-ebighi na France. Na ntanetị, naanị otu na-enye ya ohere ma ọ bụ HSBC. Ha nwekwara ike ịga n’alaka ụlọ ọrụ ma kpọtụrụ Société Générale ma ọ bụ BNP Paribas. Caisse d'Épargne na Crédit Mutuel nwekwara ike ịbịaru nso.
N'ikpeazụ, azịza ikpeazụ dịịrị ndị mbịarambịa: ọ bụ ụlọ akụ N26. Ọ bụ ụlọ akụ German nke gbatịrị n'ọtụtụ mba. Iji debanye aha, ị ga-ebi na otu n'ime mba ndị a: France, Germany, Ireland, Austria, Spain, Italy, Belgium, Portugal, Finland, Netherlands, Latvia, Luxembourg, Lithuania, Slovenia, Slovakia, Estonia na Greece . Ọ bụrụ na ọ bụ German RIB, iwu ịkpa oke ụlọ akụ dị na Europe na-akwado ụlọ ọrụ French ịnabata ya. Nhọrọ a nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'ọtụtụ ọnọdụ.
Ịmepe akaụntụ akụ na France nwere ike iyi mgbagwoju anya. Otú ọ dị, a na-eme ka omume a dị mfe karịa ọtụtụ afọ, karịsịa maka ndị mba ọzọ. Ekwesịrị ịmara ndị bankịl France ka ha mara ndị ahịa ha. Ha na-agbali inye ha ngwọta dị mfe iji mepee ozi ala ọzọ ha.
Atụmatụ maka imeghe akaụntụ akụ na France August 19th, 2018Tranquillus
gara agaỤgbọ njem na France
-esonụOkwu weelearn: Look-Learn
Akaụntụ Ọzụzụ nkeonwe (CPF)
Usoro ntinye na visa na paspọtụ na France